Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 22/01/2021)
Noise ny fandotoana ny fiantraikany ratsy dia ny tabataba eo amin'ny olona sy ny biby. Izany dia vokatry ny mahantra mivantana planning an-drenivohitra. Olana avy amin'ny tabataba ny fandotoana daty miverina any Roma fahiny! ankehitriny, tabataba loto avy amin'ny fiara Mety hahatonga fahavoazana ara-tsaina ny olona ny fanjakana. Ahitana soritr'aretina fiakaran'ny tosidrà, avo-stress haavon'ny, tinnitus, matory korontana, sy ny zavatra hafa mampidi-doza vokatry.